उमेर बिर्साउने साथीहरू | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 01/10/2010 - 13:14
सारै मिल्ने साथी हो भने वर्षौंपछि भेट भए पनि 'ग्याप' अनुभव हुँदो रहेनछ । मेरा केही यस्ता साथीहरू छन्, जससित जहिले भेट भए पनि तिनले कि चन्द्रावती हाइस्कुलको प्रांगण, कि महाराजगन्ज क्याम्पसको परसिर वा पाटन संयुक्त क्याम्पसको कम्पाउन्ड अथवा विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको सेरोफेरो टुप्लुक्क आँखा र मनमस्तिष्कमा ल्याई पुर्‍याउँछन् । हुन त काममा लाग्दा र अरू क्रियाकलापमा सरकि हुँदासमेत साथी बन्छन् तर साथी बन्ने र बनाउने काम शिक्षासित बढी सम्बन्धित रहेछ । स्कुल-क्याम्पसमा एउटै डेस्क-बेन्चमा बसिएका साथी जति प्रिय हुन्छन्, त्यत्तिकै प्रिय साथीहरू राजनीति, व्यापार वा कुनै सामाजिक आन्दोलनका मैदानहरूमा कम्ती हुन्छन् । हुँदै हुँदैनन् म भन्दिनँ । कम्ती हुन्छन् । सायद यसको कारण ती क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धा र त्यसका लागि आफू 'माथि पुग्न' गरिने दाउपेच होला । दाउपेच जति बढ्दै गयो, साथी उति घट्दै गए । विशुद्ध ऋणात्मक सम्बन्ध अर्थात् एउटा बढे अर्को घट्ने ।
दर्शन-साहित्य पढ्दै जाँदा सत्य साईबाबाका केही ठेली पढ्न भ्याएँ । नयाँ कुरा केही छैनन्, सबै जानिरहेकै विषय । भन्न पनि उहाँले म तिमीहरूले बिर्सेका ती कुरा मात्र सम्झाउन आएको, जसको तिम्रो जीवनमा ठूलो महत्त्व छ भन्नुभएको रहेछ । सम्बन्धलाई केही प्रकारहरूमा बाँडिएको छ, त्यस ज्ञान सागरमा । पहिलो सम्बन्ध 'सत्य'को रहेछ । यस सम्बन्धको नाम 'आमा' हो । आमाबाट जन्मेको भन्ने तथ्य हाम्रो जीवनको सबैले थाहा पाउने पहिलो सत्य हो । दोस्रो सम्बन्ध 'ज्ञान' हो र योचाहिँ 'बाबु' हुन् । आमाले ती तिम्रा बाबु हुन् भनी सिकाएपछि, चिनाएपछि अनि मात्र बाबुको 'ज्ञान' हुन्छ । हुन त आजका दिनमा डीएनए आदिको परीक्षणबाट मेरा बाबु को हुन् भनी जान्न सकिएला । तर, हुर्कंदै गरेको बच्चा डीएनए पर्खेर बाबु खुट्याउँदैन, आमाले बताइदिएपछि या उसका पोल्टामा राखिदिएपछि तिनै व्यक्ति बाबु भएको ज्ञानसुख प्राप्त गर्छ । तेस्रो सम्बन्ध 'धर्म'को हो । यो धर्म कुनै मठमन्दिरमा पूजाआजाको धर्म होइन तर स्वभाव र कर्तव्यपालनाको धर्म हो । धेरै ग्रन्थमा कुनै संस्कार, स्वभाव धारणा गरेपछि, त्यसलाई आत्मसात् गरेपछि त्यो धर्म हुन्छ, धारयति- इति धर्म, भनिएको छ । योचाहिँ सम्बन्धहरूका बारेमा चर्चा गर्दा 'दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नातागोता र सबै प्रकारका रगत सम्बन्ध'को समग्र स्वरूप रहेछ । यसलाई कर्तव्यका रूपमा पालन गर्नुपर्ने र यी सबै सम्बन्धलाई निर्वाह गर्नुपर्ने पनि रहेछ । कर्तव्य पालनामा जति कर्मठ हुन सकियो, नातागोताको प्रपञ्च उत्तिकै बलियो हुन्छ । त्यसमा केही मात्र 'चूक' भएका खण्डमा रगतकै नाता भए पनि सम्बन्ध चिसा हुन्छन् ।
प्राणी सधैँ बाबुआमा र नातागोताहरूकै काखमा मात्र त बस्दैन । हुर्कंदै गएपछि घरका आँगनबाट बाहिर पाइला चल्नासाथ आफूजस्ता अनेक आत्मा (व्यक्ति)सित उसको भेटघाट हुन्छ । यतिबेला सक्रिय हुने हामीभित्रै रहेको मानवीय मूल्य भनेको 'दया'को भाव रहेछ । दयालुपनको जति ठूलो विस्तार हुन सक्यो, 'साथी' उति धेरै बन्ने भए । दया र मित्रताका बीचमा धनात्मक सम्बन्ध रहेछ । सायद यही 'पोजेटिभ रिलेसन'ले गर्दा मानवलाई समूहका बीचमा प्रिय वा अप्रिय बनाउँछ । मित्र-सम्बन्ध ऐच्छिक हो । यसमा नाताको बन्धन छैन । उमेर अनुसार, पुस्ता अनुसार सानो ठूलो भनेर ढोगभेट गर्नु पनि पर्दैन । मन नपरेका व्यक्ति नाता सम्बन्धमै भए भने तिनलाई पूरै तिरस्कार गर्न सकिन्न तर मित्रतामा आफ्नै निर्णय सर्वेसर्वा हुन्छ, रगतको नाताभन्दा यो बढी गहिरो हुनुको कारण सायद यही होला । साथी-सम्बन्धको मुख्य आधार दया र दुःखसुख व्यक्त गर्ने (सेयरङि्) भएकाले होला, घरपरविारसित, कुनै नातासम्बन्धसित नभनिएका र नगरएिका कुरा र काम साथीसित सजिलै हुन्छन् । त्यसैले जति वर्षपछि मुनिराज या हर िया शलभ या चिमकाजी या ईश्वरी-गोपालजस्ता साथी भेटियून्, बीचका नभेटिएका वर्षहरू ती साथी भेट हुनासाथ आफैँ बिलाएर जान्छन् । दस वर्षपछि भेट भएको साथी हिजो मात्रै छुट्टएिर आ-आफ्नो घर गएजस्तो लाग्छ । बीचको दस वर्ष साथीहरूको मित्रताका अघिल्तिर हराउँदो रहेछ । मित्रताले समयलाई सर्लक्क निलिदिँदो रहेछ । समयलाई हराउन सक्ने तागत मित्रतामा हुँदो रहेछ । अरूसित भेट हुँदा बूढो (बूढी) भइएछ भन्ने लाग्छ तर साथीसित भेट्दा भने साथी हुन सुरु गर्दाको उमेरमै आफू फर्केजस्तो लाग्छ । समयभन्दा बलवान् त मित्रता पो रहेछ । यस्तो मित्रतालाई सलाम !
सम्बन्धहरूकै कुरा गर्दा पाँचौँ सम्बन्धको मूल मानवीय भाव 'शान्ति' हो । यो तिनै साथीहरूमध्येकै एक साथीका रूपमा आजीवन रहने पति वा पत्नीका दर्जामा रहन्छ । साथी मात्र भएर नपुगी एक जना जीवनसाथी पनि आवश्यक पर्दो रहेछ । यस एक जनासित धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष गाँसिएका छन् । धर्मलाई स्वभाव र कर्तव्य, अर्थलाई उपार्जन, कामलाई मानसिक वा शारीरकि सुख तथा मोक्षलाई मोहको क्षय भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस सम्बन्धको मुख्य मूल्य शान्ति भएन भने पतिपत्नी हुनुको स्तर नै रहन्न । पतिपत्नीका सम्बन्धमा बाँधिएर पनि आपसी मिलन वा व्यवहारमा शान्तिको भाव हरायो भने त्यस्तो सम्बन्ध निस्सार छ । हुन त यसमा विरोधाभासपूर्ण विषय छन्, आधुनिक समयमा उपार्जन र कर्तव्यविरोधी लाग्न सक्छन् । त्यस्तै कर्तव्यसित 'करकाप'को अनुभूति हुनासाथ विपरीत शक्तिले धकेलेर शान्तिलाई टाढा पुर्‍याउँछ । त्यसैले पतिपत्नीको सम्बन्ध सन्तुलनको सम्बन्ध हो ।
अन्तिम र छैटौँ सम्बन्ध 'क्षमा'भावले परपिूर्ण छ । यस सम्बन्धको जगेर्ना 'सन्तति'का माध्यमबाट हुने रहेछ । आफ्ना सन्तानप्रति मानव जति क्षमाशील र उदार हुनसक्छ, त्यति नै सबैसित हुन्थ्यो भने संसारमा द्वन्द्व भन्ने विषय नै हुने थिएन । सबै प्रकारका वैमनष्यताको चूरो अहंकार हो । अहंकारको कारण आफ्नै मात्र विचारको सर्वोच्चता हो । आफ्नै विचार मात्रको प्रमुखताले अरूका सोच र धारणालाई स्वीकार गर्दैन । अरूलाई अस्वीकार गर्नु नै क्षमाहीनता हो, क्षमाशीलता होइन । आफ्ना सन्तानका हकमा भने मानव सधैँ क्षमाशील रहँदै आएको छ । यहाँ क्षमालाई अहंकार र सार्वजनिक हितसित गाँसेर किन हेर्न जरुरी छ भने, कालान्तरमा पुगेर नोक्सान हुने काम गर्दासमेत हामी आफ्ना सन्तानप्रति क्षमाशील नै हुन्छौँ । त्यस्तो क्षमाको भाव तर आफ्नाभन्दा अरूका तिर जाँदैन । धृतराष्ट्रले भनेको 'मामका' (मेरा) र पाण्डुका भन्ने चिरफारको भावले महाभारत सिर्जना गरेको हो ।
हामी जन्मिँदा आफ्ना बाबुआमा छानेर जन्मिन सक्दैनौँ । छान्न मिल्ने भए नयाँ पुस्ताका नेपालीजति अमेरकिामा जन्मिन्थे होलान् । त्यति मात्र नभएर देश, जाति, संस्कृति, सभ्यता, भाषा आदि केही पनि छानेर यस ठाउँमा, यस जातिमा यस्तो भाषा बोल्ने भएर जन्मन्छौँ भन्न सक्दैनौँ । हामी साधारण मनुष्य हौँ । साईबाबा होइनौँ । न बाबुआमा छान्न पाइने, न त अरू नातागोता छान्न पाइने । न यस्तोलाई जन्माउँछु भनेर सन्तान नै छान्न पाइने । हाम्रा सबैजसो सम्बन्ध बाध्यकारी रहेछन् । मन नपरे अलिकति बर-व्यवहारमा घटी गरएिला या सारै भए आवतजावत नै नगरएिला तर यो व्यक्ति मेरो फलानो सम्बन्धकै होइन भन्न त मिलेन । हुँदैन । त्यसरी बाँधिएर बस्नुपर्ने सम्बन्धमा छान्न पाउने, रोज्न पाउने अधिकार हुँदैन । जन्मेपछि नमरुन्जेल त्यस नाताको निर्वाह गर्नैपर्छ ।
बीएतिर कतै अंग्रेजीमा एउटा 'ओरयिन्टल (हो कि इन्डियन) फिलसफी' भन्ने निबन्ध गुरु राममोहन महतोले बडो स्वादिलो शैलीमा व्याख्या गर्नुभएको सम्झना छ । जन्मिने दिन र मर्ने दिन हामी तय गर्न सक्दैनौँ । कसका सन्तान आफू बन्ने र को आफ्ना सन्तान बन्ने पनि आफ्ना हातमा छैन तर कसलाई आफ्नो साथी बनाउने, तीमध्ये कसलाई जीवनसाथी बनाउने अनि कुन दिनमा मित्रताको र जिन्दगीकै लगनगाँठो कस्ने भन्ने निर्णयचाहिँ हाम्रै हातमा छ । त्यसै कारणले सबै सम्बन्धका कसीमा मित्रताको सम्बन्ध सर्वश्रेष्ठ हो भनिन्छ । त्यसैले होला वर्षौंपछि भेटिएको साथी पनि नगिचैको र आत्मीय लाग्ने ।
तपाईं यस विचारको अन्त खोज्दै हुनुहुन्छ होला । यो चक्रजस्तै छ । साथीहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ सम्बन्धका आधारस्तम्भ हुन् । मित्रता स्वभावहरूमध्ये उत्कृष्ट स्वभाव हो । यसले बन्धन पनि मान्दैन । बाध्यतामा मित्रता मात्र नभएर कुनै पनि सम्बन्ध टिक्दैन । मित्रताको आदर्श प्रेम हो । यो प्रेम व्यक्तिसित मात्र नभएर परमसत्ता वा अदृश्य तत्त्वसित पनि गर्न सकिन्छ । मानवीय सम्बन्धका कुरा गर्दा मित्रमध्येको सर्वोच्च मित्र अझ पति वा पत्नी हो । किनभने, त्यहाँ छनोट, अधिकार आदि सबै छ । तर, त्यसपछिका नातासम्बन्धका र सन्ततिका सबै ढोकाहरू थप थप कैदखानाका कोठातिर जान्छन् । सम्बन्धका यिनै जञ्जालका बीचमा रमाउनुलाई नै तिमीले उपदेशग्रन्थ गीतामा कर्तव्यपालन भनेका हौ भने हे सुदर्शनधारी श्रीकृष्ण ! मेरो भन्नु क्यै छैन । फगत मलाई मेरा जीवनमा केही यस्ता क्षणहरू देऊ, जसमा म आफ्ना मिल्ने साथीहरूसित भेटेर आफ्नै बढ्दै गएको उमेर केहीछिनका लागि भए पनि बिर्सन सकूँ !
नेपाल साप्ताहिक ३७६
फुलौं साथी.... डुलौं साथी .....
माया प्रेम यत्तिकैमा चुक्ला भन्ने डर